Nzira yakanakisa yekudzidza mutauro kudzidza painotaurwa semutauro wemuno. Mune mamwe mazwi, ndiyo sarudzo yakanakisa yekuti vanhu vadzidze chiGerman kuGerman kana vaine mukana.
Ehe, iwe unogashira yakanaka dzidzo, mutauro wekunze dzidzo muTurkey inoonekwa pakati pebhizinesi rako, asi kuti unogara sei mune nyaya yekuti vanhu vataure mutauro wavo wekuzvarwa uye vawane dzidzo yako ichaita senge. Neichi chikonzero, zvinobatsira kufunga zvakanyatsonaka paunenge uchiita sarudzo dzako. Avo vanoda kudzidza chiGerman kuGerman vanyoresa muzvikoro zvinopa zvakavanzika mutauro mutauro sezvazvinogona. Nekudaro, kunze kwaizvozvo, tinoona kuti avo vanoda kudzidza chiGerman kuGerman vakapatsanurwa kuita mbiri.
Nepo yekutanga yemapoka maviri aya ichisanganisira vanhu vakakunda uye vakadzidza chirongwa chekupedza kudzidza kuGerman, boka rechipiri nderevaya vanoda kunyorera chirongwa che master uye vachironga kugadzirira zvisati zvaitika. Kana tichifanira kuongorora mapoka maviri aya zvakasiyana, tinogona kutaura zvinotevera.
Vadzidzi Vanodzidza kuGerman
Vadzidzi ava ndivo vanhu vakakunda chero chirongwa chedzidzo yepamusoro kuGerman uye vanouya kuzodzidza. Ipo dzidzo yavo ichienderera, vanoedzawo kudzidza chiGerman. Zvinoonekwa kuti vanhu vakauya kuGerman nekutambira chinzvimbo chebasa uye kuyedza kudzidza chiGerman panguva ino vakapinda muboka iri. Vanhu ava vanofanirwa kunyoresa pachikoro chemumwe mutauro uye vagamuchire dzidzo yechiGerman mundima yavanoda. Iwe unogona kuwana ruzivo nekudzokorora edu zvimwe zvinyorwa nezvenguva dzekudzidzira uye mari yekufungidzira.
Vadzidzi Vanoda Kudzidza kuGerman
Vadzidzi vari muboka iri ndeavo vanoda kunyoresa muchirongwa chedzidzo yepamusoro kana chirongwa cheyunivhesiti kuGerman. Neichi chikonzero, zvakajairika kuti ivo vanoda kudzidza chiGerman zvisati zvaitika uye kuita gadziriro. Zvakare, kana iwe ukanyoresa muchirongwa cheChirungu chepamusoro cheGerman, iwe unofanirwa kubhadhara mari yakawanda gore rega. Asi kana iwe ukawana dzidzo yemutauro nemari shoma uye wotanga kudzidza kuyunivhesiti yemutauro wechiGerman, unogona kubatsirwa nekodzero yekuwana dzidzo yemahara.